Dhageyso: Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Oo Baaq U Diray Ganacsatada. – Kismaayo24 News Agency
by admin 2nd January 2020 0127
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar [Filish] oo hadal ka jeediyay xerada tababarka ciidamada ee Janaraal Kaahiye oo ay ku sugnaayeen boqoolaal shacab ah oo ka soo hrjeeday qaraxii Ex-koontarool Afgooye ayaa ku baaqay in meel looga soo wadajeesto Shabaab.
Cumar Filish ayaa sheegay in Alshabaab ay ka dhaadhicinayaan dadka qaraxii ka dhacay Soobe kii ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir iyo kii Ex-koon tarool in ay yihiin dhammaantood kuwa sax ah haseyeeshee in yihiin wax aan banaaneeyn.
Maanta waa maalin ka astaysan maalmaha kale oo Bulshada Soomaaliyeed ay xamili u adkaysan weyday dacaayaadka iyo waxyaabaha aan la aqbali Karin umadda Soomaaliyeedna waxa la baabi’inaayo waa cududdoodii.
DAAWO: Kornayl Caare Oo Wareejiyay Hubkii Iyo Ciidamadii Uu Haystay.
Daawo: Xildhibaanada Labada Aqal ee Garoowe laga soo doortay oo Maanta loo sameeyay Sagootin iyo Shahaado gudoonsiin
Daawo: Xasan Shiikh oo si deg deg ah Isugu yeeray Safiirrada waddamada Jaamacadda Carabta Muxuuse ka Codsaday??
TOP NEWS: Jubbaland oo Shaacisay tirada Alshabaab looga dilay Dagaal shalay ka dhacay Tuulada yaaq Bishaaro oo qiyaastii 60-u jirta Kismaayo